Waa’ee Araaxaa Ilaalchisee Seerri Mal Jedha? PDF – Mana Hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. የጅማ ዞን አቃቤህግ ፅፈት ቤት፣
Waa’ee Araaxaa Ilaalchisee Seerri Mal Jedha? PDF
Posted byMana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት March 16, 2021 March 26, 2021 Posted inUncategorized
Barruu hubannoo seeraa
Qopheessan Mulugetaa M.
Abbaa Alangaa Godina Jimmaa (LL.B, LL.M)
Waa’ee Araaxaa Seerrii Maal jedha
<<Interest is the price paid for the use of other’s capital fund for a certain period of time>>
Kun gara Afaan Oromootti dheedhidhuma isaa yommuu jijjiiramu<<Dhala jechuun kaappitaala nama biro yeroo muraasaaf sababa faayyadamaniif kaaffaltii raawwatamuudha>>.Yaada barreessaati).Hiikoo kana irraa akka hubannutti dhala jechun maallaqa nama biraa irraa fudhannee(liqeeffannee) yeroo muraasaf fayyadamuu keenyaaf kaffaltii raawwatamu ta’uu hubanna.Egaa waa’ee hiikoo dhalaa gahaa ta’uu baatus hanga kana yoo jenne itti aansinee immoo dhalli seeraan eeyyamame hangami kan jedhu ija seera biyya keenyaatin ilaalla.
Cheekii Mallaqa hin qabne kennuu fi
Waliigaltee liqaa mallateessuun yakka rawwatamuudhaa.
Cheekii Mallaaqa Hin qabneen Araaxaa Rawwatamu
Waliigaltee Dawoo Godhachuun Araaxaa rawwatamu
Waliigaltee dawoo godhachuudhaan falmiwwan dhayaatan ija seera H/H tiin yommuu ilaalluu yeroo baay’ee Araaxaafi waliigaltee liqaa dawoo godhachuun falmii dhiyaatu fi galmicha irratti ilaalchota dachaa jiranidha .
Innii jalqabaa Waliigaltee mirkaneessuu kan ilaallatuudha.
Walii galteewwan bu’uura seeraatiin hundaa’an qaama waliigale jiddutti seera ta’u.
Jechoonni walii galtee keessatti argaman kan qaamonni waliigaltee uuman itti waliigalaniidha.
Sanada barreeffamaa irratti jechoonnii argaman akkasumas guyyaa barraa’e qaamota walii mallateesse jiddutti ragaa gahaa amantaan itti kennamuudha.
Jechoota barreeffama keessatti argaman mormuun kan danda’amuu jechichi isuma kana qaama jedhu kakachiisuudhaan qofa.
Jechoota barreeffama keessatti tarraa’aniif (argamaniif)ragaa nama ykn tilmaamaa sammuu dhiyessun hin danda’amu.
Barruu Qo’annaa Seeraa.